Izingubo zenja ekwindla | Izinja Umhlaba
Izingubo zenja ekwindla
USusy fontenla | | Izesekeli zezinja, Izinja ezijwayelekile
Isikhathi esisha siyeza futhi sicabanga ukushintsha ikhabethe lethu, futhi kungenzeka into efanayo nakithi ngesilwane sethu. Manje izimvula namakhaza ziyeza, futhi kufanele sihambehamba nenja yethu ngaphansi kwalezi zimo zezulu. Njengoba nje sihlanganisa ndawonye, ​​kukhona izingubo zenja zokuwa, ukuze kungadingeki ukuthi zimanzi noma zibande.
Ezitolo ungathola zonke izinhlobo zezingubo, kusuka kokuyisisekelo kakhulu kuya kwezinye okulandela ngisho nezitayela zemfashini. Uma inja yakho idinga ijazi noma ijazi lemvulaKungenxa yokuthi ijazi layo alanele ukulivikela emakhazeni, noma ngoba lincane kakhulu noma liyinja esezingeni eliphezulu, kunezingubo eziningana ezingabaluleka ngalesi sikhathi sonyaka.
Siyazi ukuthi uma kwenzeka okuthile ekwindla kuba njalo lina, ngazo isidingo sokuthengela inja ijazi lemvula ukuze ingubo yayo ingabi manzi kakhulu. Uma umswakama uhlala engubeni, ungonakala futhi udale ukhunta nezinye izinkinga. Uma iba manzi lapho sifika ekhaya, kufanele siyomise kahle, ikakhulukazi emilenzeni. Engxenyeni engenhla yokhalo kunezinhlobo zonke zamajazi namajazi emvula, ngisho nezinja ezinkulu kakhulu. Kubaluleke kakhulu uma inja inengubo engayivikeli futhi igcina ibanda lapho iba manzi, ngoba ingakwazi ukwehlisa ukuzivikela kwayo.
Ngakolunye uhlangothi kufika amakhaza, futhi ezinye izinhlobo ezinezinwele ezimfishane nezincane zinenkinga enzima, njengeChihuahua, ngokwesibonelo. Uma sinoSuserian Husky noma uMalusi waseJalimane bazozuza ngokuba sesimo sezulu esifanele uboya babo, kepha ezinye izinhlobo zizodinga ijazi ukugwema ukubanda. Into enhle ukuthi kukhona inani elikhulu lamamodeli, kukho konke ukuthanda.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izingubo zenja ekwindla
Ungayinakekela kanjani inja ene-distemper
Papillon: izici eziyinhloko zohlobo